बाउन्स दर, साइटमा समय र घटना ट्र्याकिंग | Martech Zone
बाउन्स दर, साइटमा समय र घटना ट्र्याकिंग
बुधबार, अक्टोबर 12, 2011 शुक्रबार, जुन 13, 2014 Douglas Karr
त्यहाँ अझै पनि धेरै गलतफहमीहरू छन् बाउन्स दर को परिभाषा, यसले कसरी तपाईंको साइटलाई प्रभाव पार्दै छ, र तपाईं कसरी यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं प्राय जसो गुगल एनालाइटिक्स प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, गुगलले बाउन्सलाई कसरी व्यवहार गर्दछ भन्ने बुझाइ महत्वपूर्ण छ।
पहिलो, तपाईले यसलाई महसुस गर्नुहुन्न तर साइटमा औसत समय बाउन्स गरिएको आगन्तुकहरूको लागि सँधै शून्य हुन्छ। अर्को शब्दहरु मा, तपाईं हेरिरहनु भएको रूपमा साइटमा औसत समय, यो केवल ती दर्शकहरूको लागि तपाइँको साइटमा बिताएको समय देखाउँदै बाउन्स छैन। त्यो बरु मलाई अनौठो देखिन्छ। म जान्न चाहन्छु कि मानिसहरू कतिन्जेल बसिरहेका छन् उनीहरूले बाउन्स गर्नु भन्दा पहिले म उनीहरूको ध्यान खिच्दै छु कि भनेर। दुर्भाग्यवस, केहि ह्याक्सहरू बिना यो सम्भव छैन। यसलाई आफैंमा परीक्षण गर्नुहोस् ... यहाँ छविले बाउन्स्ड आगन्तुकहरूका लागि मात्र फिल्टर गरिएको रिपोर्ट देखाउँदछ ... परिणामस्वरूपaसाइटमा औसत समय को 0।
चाखलाग्दो कुरा, यदि तपाईंको विजिटरले तपाईंको पृष्ठमा अन्तर्क्रिया गर्दछ कुनै ट्र्याकेबल तरीका (छोड्ने बाहिर), तिनीहरूलाई बाउन्सको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छैन! त्यसोभए ... यदि तपाइँ थप्नुहुन्छ भने घटना ट्र्याकिंग प्ले बटनमा वा कार्यको लागि कलमा, र व्यक्ति क्लिक गर्दछ ... तिनीहरूलाई बाउन्सको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छैन। धेरै व्यक्तिहरू सोच्दछन् कि बाउन्स त्यस्तो कोही हो जुन तपाईंको साइटमा अवतरण भयो र त्यसपछि छोडिन्छ। यो होइन ... यो जो कोही तपाईंको साइटमा अवतरण गर्छ, कुनै पनि हिसाबले अन्तर्क्रिया गर्दैन, र त्यसपछि छोडिन्छ।
यदि तपाइँ घटनाहरू वा पृष्ठमा थप पृष्ठ दृश्यहरू ट्र्याक गर्नुहुन्छ भने त्यो व्यक्ति प्राविधिक रूपमा बाउन्स थिएन। त्यसोभए यदि तपाईं एक मार्केटिंग प्रबन्धक हुनुहुन्छ जुन उच्च बाउन्स दरहरूको साथ संघर्ष गरिरहनु भएको छ भने, तपाईंलाई कम्तिमा पनि हेर्नु आवश्यक छ कि आगन्तुकहरूले तपाईंको साइटमा कुनै पनि हिसाबले अन्तर्क्रिया गरिरहेका छन् कि उनीहरू जानु अघि। यो सम्भव भएको जहाँ सबै घटना ट्र्याकि tra थप गरेर पूरा गर्न सकिन्छ।
पृष्ठ एलिमेन्टहरूको बारेमा सोच्नुहोस् जहाँ तपाईं सक्नुहुन्छ इम्बेड घटना ट्र्याकिंग:
यदि तपाईंसँग तपाईंको पृष्ठमा लिंकहरू छन् भने यातायात अफसाइट ड्राइभ गर्नुहोस् उद्देश्य मा, तपाईं या त त्यो घटना ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि कोडको एक अलि बढी आवश्यक पर्दछ, जे होस्, घटना कब्जा गरिएको छ भनेर निश्चित गर्न तपाईं पृष्ठ छोड्नु अघि.
यदि एक jQuery सक्षम साइट स्लाइडर वा अन्य तत्वहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न आगन्तुकहरूको नियन्त्रणको साथ, तपाईं एक थप्न सक्नुहुन्छ jQuery गुगल एनालिटिक्स प्लगइन जसले गतिविधिमा घटनाहरू ट्र्याक गर्न सजिलो बनाउँदछ।
यदि तपाईंसँग छ भने Youtube भिडियो, तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ युट्यूब जाभास्क्रिप्ट कोड र घटना ट्र्याकिंग थप्नुहोस्।
अर्को उन्नत विकल्प भनेको थप्न हो दोस्रो गुगल एनालिटिक्स तपाईंको पृष्ठमा र पृष्ठ लोड हुँदा तत्काल दोस्रो पृष्ठ दृश्य ट्र्याक गर्नुहोस्। यसले तपाइँको बाउन्स रेटलाई त्यो खातामा ० मा कम गर्दछ तर तपाइँलाई प्रत्येक आगन्तुकको लागि साइट तथ्या on्कहरूमा औसत समय प्रदान गर्दछ। त्यसो भए तपाई page पृष्ठ दृश्य भन्दा कमको फिल्टरको साथ क्षेत्र थप्न सक्नुहुनेछ। त्यो कुनैलाई पनि बाहिर फिल्टर गर्दछ जो टेक्निकल रूपमा बाउन्स र साइट डेटा डेटाको साथ तपाईंलाई समय प्रदान गर्दैन।
र नबिर्सनुहोस् ट्र्याक उद्योग बाउन्स दर तपाइँको साइटलाई कसरी तुलना गर्छ भनेर हेर्नको लागि। एउटा नोट - हामी साइटहरू हेर्ने गर्छौं जुनसँग उच्च खोजीमा उत्कृष्ट खोज रैंकिंग बाउन्स छ। खोजीबाट आउनेहरूको लागि आगन्तुक ब्यबहार बढी ब्राउजि reflect गतिविधि प्रतिबिम्बित गर्दछ जहाँ उनीहरूले धेरै खोज परिणामहरू जाँच गर्दै छन् र पृष्ठको द्रुत स्न्यापशट प्राप्त गरिसके पछि छोड्छन्। त्यसोभए अचम्म नमान्नुहोस् यदि तपाईंले अधिक खोजी ट्राफिक लिनुभयो र तपाईंको बाउन्स रेट बढ्यो!
टैग: उछाल दरघटना ट्र्याकिंगGoogle विश्लेषणसाइटमा समय
पारंपरिक PR छुट नदिनुहोस्
भिडियो: SmallBox वेब डिजाइन र मार्केटिंग